Olee otú naghachi kaadị ebe nchekwa na Mac na Windows
Gịnị bụ na kaadị ebe nchekwa na-eji maka?
Ọ bụ onye nke kasị mma na nke kasị ala ụzọ mee ka n'aka na data na-abụghị nanị nọ na kaadị ebe nchekwa ma ọ na-enweta mgbe ọ na-achọrọ. The ebe nchekwa kaadị na-a nnọọ nchebe n'ụzọ iji mee ka n'aka na needful na-eme na a n'ụzọ na-egosipụta àgwà na klas. Taa na oge na ebe nchekwa kaadị na-tumadi mee iji jide n'aka na ọ bụghị nanị na kam na metụtara snaps na-azọpụta ma na ekwentị mkpanaaka ọrụ na-eme ka n'aka na ebe nchekwa kaadị na-eji na-ntụrụndụ na na ngwa ọdịnala nke mobile nile na otu ebe. Iji nweta nsonaazụ kacha mma ọ na-gwara iji jide n'aka na ebe nchekwa kaadị na-abụghị nanị na-nchebe si ájá ma ha na-azọpụta site kpọmkwem ikpughe na ìhè anyanwụ. Na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi ga-emekwa ka n'aka na Atụmatụ na usoro na-nyere ka ọrụ iji jide n'aka na ọ bụghị nanị na-enweta nsonaazụ kacha mma na mmekọrita ha na kaadị ebe nchekwa ndụ kamakwa jide n'aka na-eji kaadị n'enweghị ọbụna ma ọ bụrụ na lifespan nke na kaadị ka okokụre.
Akpata na kaadị ebe nchekwa data ọnwụ
The ebe nchekwa kaadị ezie na oké mgbanwe na n'ozuzu nchekwa ụgbọ na enyewo onye ọrụ na nke kacha mma pụta ka mmewere nke ejighị ihe n'aka na-anọgide n'ebe ahụ nke na-arụtụ kwupụta eziokwu na data ọnwụ na kaadị ebe nchekwa bụghị a nnukwu ndibiat na niile na onye ọrụ kwesịrị maara nke nke na ike na-ihu na nke a. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere na pụrụ iduga data ọnwụ na niile etoju nke kaadị ebe nchekwa:
1. Human njehie bụ otu n'ime ndị isi ihe mere na-eduga na nke nke data ọnwụ na kaadị ebe nchekwa. Ọ pụrụ ime na unsecure data transfer ma ọ bụ iji na kaadị ebe nchekwa na uche na-adịghị n'ụzọ.
2. riri nke kaadị nwekwara-eduga ná mbipụta. Ọ pụtara na onye ọrụ emewo kaadị nke oghere mgbe data a na-agafere.
3. The ikpughe na okpomọkụ na kpọmkwem ìhè anyanwụ na-emekwa ka n'aka na ihe bụ nsogbu chere ihu site ọrụ na nke a. Ọ bụ ya mere dụrụ echekwa na kaadị akọrọ ebe efep ìhè anyanwụ nke mere na okwu a bụ nke mgbe chere ihu onye ọrụ na nke a.
Irrecoverable data si na kaadị ebe nchekwa
E nwere ọtụtụ ihe na oké ndị na-eduga a nke irrecoverable data si kaadị ebe nchekwa. Onye ọrụ na nke a ekwesịghị agbalị iji weghachi data na ọkachamara ndụmọdụ ga-achọ ime ka n'aka na n'ihu mmebi na-gbochie na data nwere ike gbakee. Na-esonụ bụ abụọ kasị mkpa mere na apụghị-agọ mgbe ọ na-abịa irrecoverable data si kaadị ebe nchekwa na onye ọrụ bụkwa enweghị ike ime ihe ọ bụla:
1. Complete anụ ahụ mebiri bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihe na-eduga na doro nke. Data bụ Otú ọ dị recoverable na enyemaka nke ọkaibe ngwaọrụ na elu teknụzụ na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri site na-ewere ọrụ enyemaka na nke a izere n'ihu mbipụta na ike-ihu.
2. The abụọ mere n'ihi na nke data mgbe natara bụ n'ihi na eziokwu na ọ na e overwritten. Ọzọ ọkaibe teknụzụ nwere ike iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu na nke a ma ka na-ọkachamara ndụmọdụ na-aghọ a kwesịrị na ọ kwesịrị iwere zere ihe ọ bụla ọnwụ na nke a.
Ọ na-na-kwuru na e nwere iche mbipụta na nwekwara ike iduga irrecoverable data na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ịga leta online forums na pụkwara biputere ajụjụ na nke a iji hụ na ihe bụ nsogbu bụ kpebiri. The online forums bụ oké ebe na-eme ka n'aka na ọkaibe ọrụ na-abụghị naanị ụtọ ma mkpebi na-posted n'ime chaachaa dị ka e nwere ndị ọzọ ndị mmadụ nakwa ndị na-eji ndị a nyiwe.
Olee otú naghachi kaadị nchekwa na otu click
E nwere ọtụtụ iri puku free omume na-eme ka n'aka na nke nke data mgbake na-kpebiri ozugbo o kwere omume ma mkpa nke hour bụ iji jide n'aka na nsogbu ahụ na-mgbe chere ihu na nke a na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma. Wondershare Data Recovery bụ otu ndị dị otú ahụ omume nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na naputa data n'ime oge na enweghị ihe ọ bụla hassle. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na software ga-gbalịrị mbụ tupu ịzụta mkpebi na ọ bụ ya mere na ọ dị mkpa iji hụ na nzọụkwụ na-kpọrọ aha n'okpuru na-soro. Na 550+ format mweghachi ikike na Wondershare Data Recovery bụ usoro ihe omume na akarịala onye ọrụ chọrọ na resultantly ya a pụtara na ihe omume ahụ bụ otu nke kasị mma na-eme ka n'aka na data mgbake bụ dịghị egwuregwu mgbe niile.
Nzọụkwụ a ga-agbaso bụ ndị ka ndị a:
1. The URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html bụ ebe onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na usoro ihe omume ebudatara:
2. The faịlụ ụdị bụ na-kpọmkwem:
3. The ọnwụ ọnọdụ bụ mgbe ahụ na-kpọmkwem:
4. Ozugbo faịlụ na-weghachiri chọrọ otu onye bụ na-pịrị iji jide n'aka na needful na mere ọkụkụ naghachi button:
Data-apụghị natara, ntak-a?
The software bụ doro anya na ihe kasị mma iji jide n'aka na nke furu efu data na-abụghị nanị natara ma onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma amụọ na nke a. Iji mee ka n'aka na needful a mere onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na precautionary jikoro na-e. Akakan na naanị ụfọdụ ruru ka nke nke nwere ike ime bụ eziokwu na ihe omume ahụ e arụnyere na otu mbanye site na nke data nlaghachie bụ chọrọ ugbu a, ọ ga-ahụ kwuru na data e chocked na-apụghị natara .
Banyere kaadị ebe nchekwa ụdị
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa iburu n'obi na kaadị ebe nchekwa na ụdị na-kọwaa na nke kacha mma n'ụzọ. Iji mee ka ọrụ maara nke eziokwu na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime kaadị ebe nchekwa na ụdị nke a ga-atụle mgbe eme ka a zuo:
1. SD kaadị wepụtara na 1999
2. SDHC kaadị wepụtara na 2006
3. SDXC kaadị wepụtara na 2009
Top 5 FREE SD kaadị mgbake software
3 ihe nwere mara banyere AVCHD on Mac
PhotoRec Alternatives na Yiri Mmemme maka Mac
> Resource> Mac> Olee naghachi kaadị ebe nchekwa na Mac na Windows